ngomphathi ku 18-05-02
Lo matshini Swiss cnc bobabo izixhobo ngqo processing, kwaye ungakwazi na ukugqibezela machining entsonkothileyo zezithuthi, umama, ukubhola, ekruqulayo, nangokukrola yaye sidlala ngexesha elifanayo. Oku esisetyenziselwa batch processing okuchaneka hardware kunye iindawo ezikhethekileyo ezimilise mphini ezingekho semgangathweni. Bec ...
Abantu abaninzi baqhelene ukusetyenziswa nokhowudo neenkqubo bomashini ukuhamba CNC encinane, kodwa lo mgaqo CNC umatshini nokuhamba akucacanga kakhulu. Ukuze ukwazi ukuqonda ngcono ulwazi olufanelekileyo, ndingathanda asinakukunika ulwaziso emfutshane namhlanje. Ingaba umgaqo numer amancinci ...
Kwiminyaka engamashumi amabini edlulileyo yorhwebo, ubuchwepheshe Internet iye ebhaliweyo ibonwe yokutshintsha lwehlabathi amavo mveliso kunye nobomi zoshishino. Ngophuhliso ngokukhawuleza i Internet namhlanje, "Internet dibanisa" iye yaba uphuhliso olutsha eqhelekileyo th ...
phawu New: entsha Ankai Ankai aqikelele aqikelele NC Ukufakelwa kobuchwepheshe amazwe, iingcali ekuvelisweni isiphelo ophezulu-iimveliso kumatshini CNC hamba, ngqongqo phezulu, uzinzo elungileyo 1, ngqongqo aphezulu: umatshini yonke inzima kancinci, nto leyo ivakaliswa ukulahlwa umzimba thicknes eludongeni ...
Lo matshini entsha SC385 SM203, Ankai ngempumelelo wadlula iSebe lePhondo inzululwazi kunye nokuchongwa nobuchwepheshe!
Agasti 25, 2012 Shandong inzululwazi zephondo Technology Department of University Shandong kunye iqela leengcaphephe ukuba kutyelela inkampani yethu, ukuba ukuchonga SC385 yethu yenkampani, SM203 CNC uhlobo Swiss umatshini lathe wokugaya ezintsonkothileyo, iqela abehla ngayo iimveliso R & D inkampani wam anike nga phezulu ...
Ukuba awuyazi into Google Analytics na, hayi ukuba abafake kwiwebhusayithi yakho, okanye ndimmisile kodwa zange jonga data yakho, ngoko ke esi sithuba kuni. Nangona kunzima ukuba abaninzi ukukholwa, kusekho websites ukuba awusebenzisi yokuHlaziya Google (okanye nayiphi lezibalo, ngokuba ...